Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ပူတာအိုဒေသ ဖမ်းမိသောဗမာစစ်သား နဲ့ ဒေသတွင်းမူးယစ် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့
ပူတာအိုဒေသ ဖမ်းမိသောဗမာစစ်သား နဲ့ ဒေသတွင်းမူးယစ် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့
at 5/11/2015 09:18:00 AM
Our Land Putao
ပူတာအို; ""ဘိန်းသယ်ဆောင်သောကြောင့် ဖမ်းမိသော ဗမာစစ်သားသည် စစ်တပ်တွင်းက တပ်ရင်းလူကြိးတွေလာပြိး ပြန်ခေါ်သွားသည် ဟုဆိုသည်။ ဒေသတွင်း ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့လည်း အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေကြောင်းသိရပါတယ်။""
ဘိန်းသယ်ဆောင်မူဖြင့်ဖမ်းလိုက်သော ဗမာစစ်သားကို ရဲလက်အပ် ထောင်ထဲထည့်ပြိး သူနဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်း စစ်ဆေးမေးမြန်လျှက်ရှိရာ ခရိုင်ရဲဌာန အချုပ်ထောင်ကနေ စစ်တပ်မှ စစ်တပ်ရင်းလူကြိးတွေလာပြိး စစ်တပ်ကို ထုတ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟုသိရသည်။
ထိုသူထံမှစစ်ဆေးမေးမြန်ပြိး ပို့သူ, လက်ခံသူ, ပါဝင်ပတ်သက်သူ နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ပါတစ်ပါးတည်း ထုတ်ဖော်ဖမ်းဆည်းဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ အမူမှန်ပေါ်မည် စိုးရိမ်ပြိး စစ်တပ် Power သုံးပြိးဖုံးဖိလိုက်တာဟာ ပြည်သူလူထုအတွက် အလွန်နစ်နာစရာပင်ဖြစ်သွားသည်။
ရွာက ရပ်ကွက်လူကြိး တစ်ယောက်က ခုလိုပြောပါတယ် ""ဒီဗမာအစိုးရဟာ ဘိန်း မူးယစ်ဆေးကို လက်နက်သဖွယ်အသုံးပြုပြိး ကျနော်တို့လူမျိုး အားလုံးကို ကျနော်တို့ဒေသကနေ ပပျောက်သွားအောင် ကြံစည်လုပ်ဆောင်တာ အခုတော့ ကောင်းကောင်း ဒေသခံတွေနားလည်ကြပါပြိ"" ဟုဆိုသည်။
ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကတစ်ယောက် အခုလိုပြောပါတယ် "" အစတော့ ဘိန်းရောင်းသူ, ဘိန်းစီးပွားလုပ်သူနဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို ဖမ်းဖို့ ရဲဌာနကို ကျနော်တို့အဖွဲ့က ပြောပြတယ် ဒါပေမဲ့ အဲဒီရဲတွေကပဲ ထိုဘိန်းလုပ်စားသမားတွေကို သိခိုင်းတယ် သတင်းပေးပြန်တယ် ဒါကြောင့် အခုတော့ ကျနော်တို့ ဖမ်းပြိးမှ ရဲလက်အပ်ခြင်း တွေလုပ်ဆောင်လာရတာဖြစ်တယ်"" ဟုပြောပါတယ်။
ထို မူးယစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာ ပူတာအိုဒေသ ရှိသော ဒေသခံ လီဆူ ရဝမ် ဂျိန်းဖော ရှမ်း တွေ အတူတကွ စည်းလုံးပြိး ဘိန်းနဲ့ အစရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ ပူတာအိုဒေသမှ ရှင်းထုတ်ပစ်ရန် ရည်ရွယ်ပြိး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ ရဲတွေနဲ့ အတူပူပေါင်းပြိး မူးယစ် နိမ်နင်းရေး လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။
*Tvpké vpmà we Pinlà Pè nvng Múyit gønyu (tauklányé) mvdò dang*
Putao: Gani ríò rvt tvpké vpmà we pinla pè nø Pindvp shaqrérìí lù vpma wae. Vrá, Múyit Gønyu mvdò gø té shvla dø bvnlì wae wa shálúnshìe.
Gani ríò rvt tvpké vpmà we pinla pè nø Yé rìí Tong yv́ng rúngò nø̀ àng nvng cing dø jip mvnòe wae. Íwe, Yé tong kèní Pindvp shaqrérìí Pindvp sv̀ng lù bǿà wae. Chak wa nø, wepè kèní, shvrishú pè, vtoshú pè nv̀ng àngmaq bvnlì tiqdø warì shvngbe tvpnø̀ mvrà zírà we, welòng bung daqe wanø̀ Power láng dángí maò wenø̀ gvzà màdu bǿì.
Mvrìng shaqré tiqpè yadø shø̀ne, “Min vzúyaq rìí nø Gani sv̀ng shinvt ku lángò nø nøngmaq dvcì shvngbe nøngmaq rvgaq kèní shvmáng lv́m vjønò we vkvt nø shvlá wa cíng bǿshà” wae.
Múyit Gønyu mvdò kèní tiqpè yadø shø̀ne, “Nvmlat nø Gani nvmrì, Gani wulaq wari nv̀ng aq rì tvp lv́m Yé pèla sv̀ng dvtáìe. Íwe, Yé rìí vrá werì sv̀ng dvtáò nø vtshì dvzáròe. Wervt, vkvt kèní nø nøngmaqí tvp dángí Yérì wur sv̀ng tvle ìe” wae.
Múyit Gønyu mvdò nø Putao rvgaq vlwe Lisu, Rvwang, Vpuq nvng Sam rì tiqdø wáshì nø Gani nv̀ng Vrùra pv̀n Putao móng kèní shvmáng lv́m dvzaqshì nø bvnlì wa we tiq mvdò íe. Angmaq nø Yé pèlaó tiqdø vzø̀m nø bvnlì wa we íe.
Kagabu Rvwangce ပြောချင်တာတစ်ခု
ရဲလဲ ဘိန်းသမားနဲ့ ဆက်သွယ် ဘိန်းရှုတာပဲ
ရဲ = ဘိန်းစား
စစ်တပ် တပ်မတော်လဲ ဘိန်းလုပ်ငန်းနဲ့ဒေသခံတွေကို နိမ့်စက်တာပဲ
စစ်တပ် = ဘိန်းစား
ရဲ = စစ်တပ်
added3new photos — with Dingla Sengjaand 48 others. 12 hrs · Edited · *************************************** ×××××××××××××××××××××××